နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ရှရီနရန်ဒရာမိုဒီ၏ ဒုတိယအကြိမ်ဝန်ကြီးချုပ်သက်တမ်း ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် | NLD
Home News Breaking News နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ရှရီနရန်ဒရာမိုဒီ၏ ဒုတိယအကြိမ်ဝန်ကြီးချုပ်သက်တမ်း ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်
Posted By: mygate wayon: မေ 30, 2019 In: Breaking News, Chairperson, News
နယူးဒေလီ မေ ၃၀
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့် ဦးဆောင် သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ အထူးလေယာဉ်ဖြင့် ထွက်ခွာရာအိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့သို့ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၁၁ နာရီခွဲတွင် ရောက်ရှိကြသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် အဖွဲ့အားအိန္ဒိယ ပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာနအတွင်းဝန် (ကောင်စစ်ရေးရာ) H.E. ShriSanjivArora၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီး မစ္စတာဆော်ရက်(ဘ်)ကူးမား၊ အိန္ဒိယပြည်ပရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမိုးကျော်အောင်နှင့်ဇနီး၊ စစ်သံမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် သိန်းဇော်နှင့် တာဝန်ရှိသူများကနယူးဒေလီမြို့ Palamလေတပ်စခန်းလေဆိပ်၌ ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်အဖွဲ့သည် မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် ခေတ္တတည်းခိုမည့် Hotel ITC Mauryaသို့ ရောက်ရှိကြသည်။
မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်သည်နယူးဒေလီမြို့ရှိ မြန်မာသံအမတ်ကြီးနေအိမ်သို့ရောက်ရှိပြီးမြန်မာသံရုံးနှင့်စစ်သံရုံးတို့မှ သံရုံးဝန်ထမ်းများ၊ မိသားစုဝင်များနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီးေ တွ့ဆုံကာ လိုအပ်သည်များကိုမှာကြားသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် မြန်မာသံရုံးနှင့် စစ်သံရုံး ၀န်ထမ်းမိသားစု များအတွက် လက်ဆောင်ပစ္စည်းများပေးအပ်သည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နှင့် အဖွဲ့သည် နယူးဒေလီမြို့ရှိအမျိုးသားပြတိုက်သို့ရောက်ရှိကြပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ခေတ်အဆက်ဆက်သမိုင်းယဉ်ကျေးမှု၊အနုပညာနှင့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း ပြခန်းတို့ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှု လေ့လာကြသည်။
ဆက်လက်၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အတူနယူးဒေလီမြို့ရှိ India Gate သို့ သွားရောက် လ့လာပြီးအမှတ်တရစုပေါင်းမှတ်တမ်းတင် ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။
ညပိုင်းတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နှင့် အဖွဲ့သည်နယူးဒေလီမြို့ သမ္မတအိမ်တော်(RashtrapatiBhavan)၌ ကျင်းပသည့် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ရှရီနရန်ဒရာမိုဒီ၏ ဒုတိယအကြိမ် ဝန်ကြီးချုပ်သက်တမ်းကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်သည်။
ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲသို့သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသမ္မတမစ္စတာမိုင်သရီပါလဆီရီစီနာ၊ ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံသမ္မတ မစ္စတာဆော်ရွန်ဘေးဂျန်ဘီကို့ဗ်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသမ္မတမစ္စတာမိုဟာမက် အဗ္ဗဒူလ် ဟာမစ်၊ နီပေါနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာကေပီရှာမာအိုလီ၊ ဘူတန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလိုတေးရှားရင်း၊ မော်ရစ်ရှပ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာပရာဗင့်ကူးမားဂျက်နော့၊ ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် စိုက်ပျိုးရေးနှင့်သမဝါယမဝန်ကြီးမစ္စတာဂရီဆာဒါ ဘွန်းရေ့စ်တို့လည်းတက်ရောက်ကြသည်။
ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲအပြီးတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်သည် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ရှရီနရန်ဒရာမိုဒီနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံ၍ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်း နှုတ်ဆက်စကားပြောကြားပြီးမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြသည့် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၊ အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲများနှင့်အတူစုပေါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။
အဆိုပါ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲတွင် အိန္ဒိယ သမ္မတနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အတူ ၎င်း၏ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများလည်းတစ်ပါတည်းကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့ကြသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၊ အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အတူအိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံသမ္မတမစ္စတာရမ် နက်သ် ကိုဗင့်ဒ်ကတည်ခင်းဧည့်ခံသည့် ညစာစားပွဲသို့ တက်ရောက်သည်။
နိုငျငံတျောသမ်မတဦးဝငျးမွငျ့အိန်ဒိယသမ်မတနိုငျငံ ဝနျကွီးခြုပျ ရှရီနရနျဒရာမိုဒီ၏ ဒုတိယအကွိမျဝနျကွီးခြုပျသကျတမျး ကမျြးသစ်စာကြိနျဆိုပှဲအခမျးအနားသို့ တကျရောကျ
နယူးဒလေီ မေ ၃၀
ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျော နိုငျငံတျောသမ်မတဦးဝငျးမွငျ့ဦးဆောငျ သောကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောအပွညျပွညျဆိုငျရာလဆေိပျမှ အထူးလယောဉျဖွငျ့ထှကျခှာရာအိန်ဒိယသမ်မတနိုငျငံနယူးဒလေီမွို့သို့ ဒသေစံတျောခြိနျ နံနကျ ၁၁ နာရီခှဲတှငျ ရောကျရှိကွသညျ။
နိုငျငံတျောသမ်မတနှငျ့ အဖှဲ့အားအိန်ဒိယ ပွညျပရေးရာဝနျကွီးဌာနအတှငျးဝနျ (ကောငျစဈရေးရာ) H.E. ShriSanjivArora၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာအိန်ဒိယသံအမတျကွီး မစ်စတာဆျောရကျ(ဘျ)ကူးမား၊ အိန်ဒိယပွညျပရေးရာဝနျကွီးဌာနမှ တာဝနျရှိသူမြား၊ အိန်ဒိယနိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာသံအမတျကွီး ဦးမိုးကြျောအောငျနှငျ့ဇနီး၊ စဈသံမှူး ဗိုလျမှူးခြုပျ သိနျးဇျောနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားကနယူးဒလေီမွို့ Palamလတေပျစခနျးလဆေိပျ၌ ကွိုဆိုနှုတျဆကျကွသညျ။
ထို့နောကျ နိုငျငံတျောသမ်မတနှငျ့အဖှဲ့သညျ မျောတျောယာဉျမြားဖွငျ့ ခတ်ေတတညျးခိုမညျ့ Hotel ITC Mauryaသို့ ရောကျရှိကွသညျ။
မှနျးလှဲပိုငျးတှငျ နိုငျငံတျောသမ်မတဦးဝငျးမွငျ့ သညျနယူးဒလေီမွို့ရှိ မွနျမာသံအမတျကွီးနအေိမျသို့ ရောကျရှိပွီးမွနျမာသံရုံးနှငျ့စဈသံရုံးတို့မှ သံရုံးဝနျထမျးမြား၊ မိသားစုဝငျမြားနှငျ့ ရငျးရငျးနှီးနှီးတှဆေုံ့ကာ လိုအပျသညျမြားကိုမှာကွားသညျ။
ထို့နောကျ နိုငျငံတျောသမ်မတသညျ မွနျမာသံရုံးနှငျ့ စဈသံရုံး ဝနျထမျးမိသားစု မြားအတှကျ လကျဆောငျပစ်စညျး မြားပေးအပျသညျ။
ယငျးနောကျ နိုငျငံတျောသမ်မတဦးဝငျးမွငျ့နှငျ့ အဖှဲ့သညျနယူးဒလေီမွို့ရှိအမြိုးသားပွတိုကျသို့ရောကျရှိကွပွီးအိန်ဒိယနိုငျငံ၏ ခတျေအဆကျဆကျသမိုငျး ယဉျကြေးမှု၊ အနုပညာနှငျ့အသုံးအဆောငျပစ်စညျး ပွခနျးတို့ကိုလှညျ့လညျကွညျ့ရှု လလေ့ာကွသညျ။
ဆကျလကျ၍ နိုငျငံတျောသမ်မတသညျ အဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့အတူနယူးဒလေီမွို့ရှိ India Gate သို့ သှားရောကျလလေ့ာပွီးအမှတျတရစုပေါငျးမှတျတမျးတငျ ဓာတျပုံရိုကျသညျ။
ညပိုငျးတှငျ နိုငျငံတျောသမ်မတဦးဝငျးမွငျ့နှငျ့ အဖှဲ့သညျနယူးဒလေီမွို့ သမ်မတအိမျတျော (RashtrapatiBhavan)၌ ကငျြးပသညျ့ အိန်ဒိယသမ်မတနိုငျငံဝနျကွီးခြုပျ ရှရီနရနျဒရာမိုဒီ၏ ဒုတိယအကွိမျ ဝနျကွီးခြုပျသကျတမျး ကမျြးသစ်စာကြိနျဆိုပှဲအခမျးအနားသို့ တကျရောကျသညျ။
ကမျြးသစ်စာကြိနျဆိုပှဲသို့သီရိလင်ျကာနိုငျငံသမ်မတမစ်စတာမိုငျသရီပါလဆီရီစီနာ၊ ကာဂဈြစတနျနိုငျငံသမ်မတ မစ်စတာဆျောရှနျဘေးဂနျြဘီကို့ဗျ၊ ဘင်ျဂလားဒရှေျ့ နိုငျငံသမ်မတမစ်စတာမိုဟာမကျ အဗ်ဗဒူလျ ဟာမဈ၊ နီပေါနိုငျငံဝနျကွီးခြုပျ မစ်စတာကပေီရှာမာအိုလီ၊ ဘူတနျနိုငျငံဝနျကွီးခြုပျ ဒေါကျတာလိုတေးရှားရငျး၊ မျောရဈရှပျနိုငျငံဝနျကွီးခြုပျ မစ်စတာပရာဗငျ့ကူးမားဂကျြနော့၊ ထိုငျးနိုငျငံဝနျကွီးခြုပျ ၏ အထူးကိုယျစားလှယျ စိုကျပြိုးရေးနှငျ့သမဝါယမဝနျကွီးမစ်စတာဂရီဆာဒါ ဘှနျးရစျေ့တို့လညျးတကျရောကျကွသညျ။
ကမျြးသစ်စာကြိနျဆိုပှဲအပွီးတှငျ နိုငျငံတျောသမ်မတဦးဝငျးမွငျ့သညျ အိန်ဒိယသမ်မတနိုငျငံဝနျကွီးခြုပျ ရှရီနရနျဒရာမိုဒီနှငျ့ ရငျးရငျးနှီးနှီးတှဆေုံ့၍ ဂုဏျယူဝမျးမွောကျကွောငျး နှုတျဆကျစကားပွောကွားပွီးမှတျတမျးတငျဓာတျပုံရိုကျသညျ။
ထို့နောကျ နိုငျငံတျောသမ်မတသညျ အခမျးအနားသို့ တကျရောကျလာကွသညျ့ နိုငျငံခေါငျးဆောငျမြား၊ အစိုးရအဖှဲ့အကွီးအကဲမြားနှငျ့အတူစုပေါငျးမှတျတမျးတငျဓာတျပုံရိုကျသညျ။
အဆိုပါ ကမျြးသစ်စာကြိနျဆိုပှဲတှငျ အိန်ဒိယသမ်မတနိုငျငံဝနျကွီးခြုပျနှငျ့အတူ ၎င်းငျး၏ အစိုးရအဖှဲ့ဝငျ ဝနျကွီးမြားလညျး တဈပါတညျး ကမျြးသစ်စာကြိနျဆိုခဲ့ကွသညျ။
ယငျးနောကျ နိုငျငံတျောသမ်မတသညျ နိုငျငံခေါငျးဆောငျမြား၊ အစိုးရအဖှဲ့အကွီးအကဲမြား၊ ကိုယျစားလှယျမြားနှငျ့ အတူအိန်ဒိယသမ်မတနိုငျငံသမ်မတမစ်စတာရမျ နကျသျ ကိုဗငျ့ဒျကတညျခငျးဧညျ့ခံသညျ့ ညစာစားပှဲသို့ တကျရောကျသညျ။
Crd # Myanmar President Office
နိုငျငံတျောသမ်မတဦးဝငျးမွငျ့ အိန်ဒိယသမ်မတနိုငျငံဝနျကွီးခြုပျ ရှရီနရနျဒရာမိုဒီ၏ ဒုတိယအကွိမျ ဝနျကွီးခြုပျသကျတမျး ကမျြးသစ်စာကြိနျဆိုပှဲအခမျးအနားသို့ တကျရောကျရနျ အိန်ဒိယနိုငျငံသို့ထှကျခှာ
အမျိုးသားဒီမိုက​ရေစီ အဖွဲ့ချုပ်​ မ​ကွေးတိုင်း​ဒေသကြီး ၊ ခရိုင်​ ၊ မြို့နယ်​ ၊ ရပ်​/​ကျေး(အမှု​ဆောင်​များ) လုပ်​ငန်းညှိနှိုင်း အထူး​တွေ့ဆုံပွဲ
အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ၊ ဗဟိုပွနျကွားရေးကျောမတီနှငျ့ ပွညျနယျနှငျ့တိုငျးဒသေကွီး ပွနျကွားရေးကျောမတီမြား Video Conferencing ဖွငျ့ အစညျးအဝေးပွုလုပျ
နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံ ပုဂ်ဂိုလျ အမြိုးသားအဆငျ့ စတေနာ့ဝနျထမျး ဦးဆောငျအဖှဲ့ ဥက်ကဌ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ မှ အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ ကရငျပွညျနယျ လူငယျလုပျငနျးအဖှဲ့ ၏ COVID-19 ကာကှယျ ထိနျးခြုပျ ကုသရေးဆိုငျရာ လုပျငနျးစဉျမြား၌ ပါဝငျကူညီ ဆောငျရှကျခဲ့ခွငျးမြား အတှကျ ပေးပို့သညျ့ ဂုဏျပွုမှတျတမျးလှာ
ကရငျပွညျနယျ ဝနျကွီးခြုပျ နနျးခငျထှေးမွငျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အစ်စရေးနိုငျငံ သံအမတျကွီး H.E Mr.Ronen Gilor နှငျ့ တှဆေုံ့